Alderweireld, Herrera, Neymar, Wenger, Ederson, Butland & Wararkii Ugu Dambeeyay Ee Suuqa Kala iibsiga – Kooxda.com
Home 2018 February Suuqa, Wararka Maanta Alderweireld, Herrera, Neymar, Wenger, Ederson, Butland & Wararkii Ugu Dambeeyay Ee Suuqa Kala iibsiga
Alderweireld, Herrera, Neymar, Wenger, Ederson, Butland & Wararkii Ugu Dambeeyay Ee Suuqa Kala iibsiga
Kooxda Man United ayaa isha ku haysa xaalada daafaca kooxda Tottenham ee Toby Alderweireld, 28 jirkan reer Belguim ayuu heshiiskiisu dhacayaa 18 bilood kadib waxana laga reebay kooxdii Tottenham ee la ciyaartay kooxda Juventus kulankii champions league (Manchester Evening News).
Goolhayaha kooxda Stoke City ee Jack Butland oo 24 jir ah ayaa sheegay in aan loo sheegin in uu isaga tago kooxda Stoke City kadib markii lala xiriiriyay kooxaha Liverpool & Arsenal (ESPN).
Kooxda Ac Milan ayaa qorshaynaysa in ay dalab 30 milyan ah ka gudbiso saxiixa xiddiga khadka dhexe uga ciyaara kooxda Man United ee Ander Herrera oo 28 jir ah xilli ay xiriir la sameeyeen wakiilkiisa (Tuttosport).
Kooxda Real Madrid ayaa ku kalsoon in ay la soo saxiixan doonto weeraryahanka kooxda Paris St-Germain ee Neymar oo 26 jir ah marka la gaaro xagaaga (Independent).
Si kastaba ha ahaatee, ra’iisal wasaaraha Spain, ee Mariano Rajoy ayaa sheegay in uuna jeclayn in uu xiddiga reer Brazil ku arko Spain (AS).
Kooxda Real Madrid ayaa 600 oo Milyan u isticmaali doonta in ay xagaaga ku horumariso kooxdeeda xilli uu xiddigaha ay doonayaan ugu horeeya Weeraryahanka Harry kane oo 24 jir ah (Sports Illustrated).
Da,yarka kooxda Ajax ee Justin Kluivert ayaa sheegay in uu ka fiirsanayo in uu u soo dhaqaaqo Premier league isaga oo sheegay in kooxaha Arsenal, Tottenham, Chelsea & Manchester United ay yihiin kooxaha uu u ciyaari karo (Mirror).
Kooxda Arsenal ayaa durba qorshaynaysa nolosha ka dambaysa Tababare Arsene Wenger hadii uu tago xagaaga xilli ay kooxdu iska ilaalinayso in ay wakhti dheer ka maqnaato champions league (Mail).
Xiddiga diirada u saaran kooxaha Man United iyo Chelsea ee Arturo Vidal ayaa sheegay in uu ku faraxsan yahay Bayern Munich kuna sii sugnaan doono ilaa inta uu heshiiskiisu ka dhici doono 2019 (Sport).
Kooxda Man City ayaa heshiis cusub ka saxiixan doonta goolhayayah Ederson oo 24 jir ah 7 bilood kadib markii uu ku soo biiray Hogaamiyayaasha horyaalka (Sun).
Kooxda Roma ayaa heshiis cusub ka saxiixanaysa goolhayeheeda Alisson iyada oo heshiiskiisa ku xiri doonta lacag dhan 90 milyan oo lagu bur-burin karo xilli 25 jirka reer Brazil lala xiriirinayo kooxda Liverpool (Calciomercato).